Shaqa ka fariisigii dareewallada oo heshiis laga wada gaarey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shaqa ka fariisigii dareewallada oo heshiis laga wada gaarey
La cusbooneeyay fredag 28 juni 2013 kl 13.01
La daabacay fredag 28 juni 2013 kl 09.06
Shaqa ka fariisigii oo laga heshiiyey
Sawirle: Erik Myrlund
Ururka shaqaalaha Kommunal iyo ururka shaqa-bixiyeyaasha ayaa heshiis ka wada gaarey xaaladdii shaqa ka fariisi ee dareewallada basaskuk u jireen ku dhowaad toban maalmood.
Marka laga yimaado mushaarooyinka shaqaalaha oo kor loo qaadey 1732 koron muddo saddex sannadood ah ayey labada garab sidoo kale ku heshiiyeen in kolka shirkadda basaska ey la wareegto shirkad kale muhiimadda koowaad la siiyo in la howl-geliyo dareewallada iminkaba ka howl-gala shirkaddaa. Heshiiska ayuu sidoo kale ka mid yahay in la isla gaarey tirada mushaaradda ugu hooseeysa ee shaqaalaha dareewallada gaadiidka dad-waynaha aan horay u lahayn iyo sidoo kale in kor loo qaaday awoodda shaqaaluhu ku leeyihiin dejinta jadwalka hoowlahooda.
Gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee Kommunal Annelie Nordström, ayaa sheegtay inay ku qanac-san tahay in ururku ku guuleeystay suurtagalka uu u helay in afartiisii shuruudood ee ugu muhiim-saneyd ey u meel-mareen.
Halka uu ururka shaqa-bixiyeyaashu sheegay in kor u kaca mushaar ee heshiiska lagu wada gaaray u dhigmo kuwa ey wada-gaareen garabyada kale ee shaqaalaha iyo shaqa-bixiyeyaasha.
– Heshiiskan cusub ayay ka muuqdaan kor u kac wada-hadal ee la xiriira welwelka shaqaalaha kolka laga wada xaajooneyo shirkadaha la kala iibsaneyo., sida uu saxaafadda warqad ugu qoray ururka shaqa-bixiyeyaashu.
Weli waxaan caddeeyn goorta ey hoowshooda si rasmi ah ugu soo noqon doonto habkii lagu yiqiin, hase yeeshee ey qaar badan ee basaskaasi ka mid ahi hoowlahoodi haddaba bilaabeen, sida uu sheegay ururka shaqa-bixiyeyaashu.